Isbitaallada Nairobi oo wajahaya daawo la’aan – The Voice of Northeastern Kenya
Isbitaallada Nairobi oo wajahaya daawo la’aan
Waxaa isasoo taraya walaac xoogan oo laga muujinayo in isbitaallada guud ee ay dowladda maamusho eek u yaalla Nairobi ay wajahayaan dhibaatooyin dawo yaraan ah.
Arrintaan ayaa ka dmabeysay markii ay hay’adda dowladda u qaabilsan daawo bixinta howshaas u joojisay sababo la xiriira in aan wali la bixinin lacag deyn ah oo dhan 150 million oo shilin.
Gudoomiyaha gudiga caafimaadka ee Nairobi Manoah Mboku ayaa sheegay in mushkiladda daawo la’aanta ah ay kusoo wajahantahay xarumo waaweyn oo bixiya adeegyada caafimaadka oo ku yaalla maamul goboleedka Nairobi, kuwaasoo ay ka mid yihiin isbitaallada Mbagathi, Mama Lucy Kibaki iyo Mutuini.
Mr Mboku ayaa waaxda maaliyadda ee dowlad goboleedka Nairobi ku eedeeyay in ay ku guul dareysatay in ay bixiso lacagta deynta ah ee ay u baahantahay laanta bixisa qalabka caafimaadka ee Kenya ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaanno (Kemsa).
Sarkaalka ayaa sidoo kale wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka ku dhaliilay in taas badalkeeda ay qarashaad badan ku bixineyso soo iibinta gawaarida loogu tala galay maamulka dowladda Countiga.
Bishii lasoo dhaafay ayey ahayd markii ay shacabka ku dhaqan Nairobi dhibaato kala kulmeen daawo la’aan soo food saartay isbitaallada guud kadib markii ay laanta Kemsa go’aansatay in aysan daawooyinka bixinin maadaama la bixin waayay lacag deyn ah oo gaareysay 108 million oo shilin, taasoo hadda sii korortay oo noqotay 150 million oo shilinka dalka ah.
← Sarkaal ka tirsan dowlad goboleedka Machakos oo loo maxkamadeeyay kiis fara xumeyn ah
Turkey oo ku hanjabtay in uu ka noqonayo heshiiskii hakinta qaxootiga ee ay la gashay Midowga Europe →